[APK] Dami maqalka leex-leexashada inta lagu jiro wicitaanka Khariidadaha | Androidsis
[APK] Khariidadaha Google nooca 9.20 wuxuu helayaa awood uu ku daro meelo taariikhda iyo inbadan
Manuel Ramirez | | APK, Codsiyada Android, Noticias
Bishii hore waxaan helnay cusboonaysiin xiiso leh Khariidadaha Google kaas oo keenay habka wadista iyo digniinta maqalka oo ah labada shaqo ee ugu muhiimsan. Khariidadaha Google oo u muuqda inay dhigayaan baytariyada dhawaanahan kahor imaatinka Khariidadaha Nokia HERE iyo kuwa kale ee la heli karo si loo helo khariidadaha khadka tooska ah ama kuwa tooska ah, mid ka mid ah astaamaha ay aadka u dalbadaan dadka isticmaala Khariidadaha tan iyo markii uu hawlgab noqday dhowr sano ka hor. Sidaas darteed Google waxay bilaabaysaa warar yar iyada oo aan wax weyni jirin, laakiin taasi waxay ku kordhineysaa tayo dheeri ah waayo -aragnimada adeegsadaha ee la helo adoo adeegsanaya barnaamijkan maalin kasta si aad baabuur ugu waddo shaqada ama aad u ogaato meel cusub oo ay tahay inaad u lugayso ama gaadiidka dadweynaha.
Nooca 9.20 ma laha astaamo waaweyn, laakiin waxaa ku jira xoogaa horumar ah oo la taaban karo. Helitaanka tooska ah ee jadwalka ama jadwalka ayaa lagu daray taas oo u oggolaanaysa, si deg deg ah, in lagu daro meel taariikhda goobta, dejimaha qaarkood si loo xakameeyo tilmaamaha marba mar la bixiyo ee la bixiyo inta lagu jiro wicitaannada codka iyo Khariidadaha, hadda ayaa daryeeli doona u dhigma dib u eegista la siiyay sawirrada in aad rartay. Cusboonaysiin cusub oo noo oggolaan doonta inaanan waalan markaan helno wicitaan oo aan marin u helno goob firfircoon oo leh waxa ay ka dhigan tahay dhageysiga qofka soo wacaya iyo kuwa soo noqnoqda ee lama filaanka ah.
1 Faallooyinka sawirradaada
2 Demi leexo-ka-leexashada inta lagu jiro wicitaanka codka
3 Ku dar meel taariikhdaada goobta
Mid ka mid ah xulashooyinka ugu fiican ee aan ku haysanno Khariidadaha Google waa inaan awoodno fikraddeena ku dhaaf baar ama makhaayad si qofka xiga ee soo booqda dhismaha uu wax yar uga ogaado tayada adeegga ama haddii cuntadu ay tahay mid laga filayo. Tilmaamo gaar ah oo ka mid ah dib -u -eegista oo ku kaxeynaya ganacsiyada inay si wanaagsan wax u qabtaan iyo in kuwa tayada sare leh ay helaan dhibcaha ugu fiican.
Cusboonaysiintaan cusub, Khariidadaha Google ayaa daryeeli doona u dhigma sawirrada laga helay dhismaha si loogu daro dib -u -eegista laga sii daayay meesha. Dib -u -eegistaani waxay hadda lahaan doontaa sawirro muujinaya heerka aasaaska ama ganacsiga.
Demi leexo-ka-leexashada inta lagu jiro wicitaanka codka
Kii aan isaga ku dhicin in markii uu u kaxaynayey meel cusub oo uu maraakiibtu si firfircoon uga leexanayo codkeeda, daqiiqad la siiyay wicitaan, Wuu qaataa oo si lama filaan ah ayuu u yara waalaa adiga oo leh codka Khariidadaha iyo kan saaxiibka oo isku jira.
Waxaad had iyo jeer aamusi kartaa tilmaamaha markaad isticmaaleyso astaanta lagu hirgaliyay casriyeyntii hore, laakiin midkan cusub waxaa ku jira ikhtiyaar aad u xiiso badan oo leh astaan ​​daryeesha dami leexo leexo marka codka la hoos dhigo.
Ikhtiyaarkan waxaa laga helaa hoosta Settings> Dejinta Hagaajinta> Codka Ciyaar inta lagu jiro wicitaanada codka. Waxaa lagu dhaqaajiyaa si toos ah, markaa ka dhig haddii aadan laba cod isku mar kuu sheegin tilmaamaha isku mar.
Ku dar meel taariikhdaada goobta
Taariikhda goobtu waxay ahayd mid ka mid ah astaamaha helay xoogaa isbeddello ah, taas oo macnaheedu yahay in dad badani runtii aysan garanayn sida loo isticmaalo. Noocan cusub waxaa naloo soo bandhigay suurtagalnimada ku dar joogsi.
Laga soo bilaabo Jadwalkayga> Dejinta> Ku dar goob> Ka dooro meesha talooyinka dhexdooda> Xulo taariikhda iyo waqtiga oo keydi. Tilmaamo qaarkood oo ku habboon in la saxo ama lagu daro joogsiyo badan marka mid uun la ogaado.
Hagaajinta kale ee nuqulkan cusubi wuxuu ku yimaadaa maraakiibta. Halkii aan ka muujin lahayn khadadka halkay tahay inaan u jeedno, Khariidadaha hadda tus magacyada waddooyinka iyo kuwa laga baxo si aad u rogto.
In kasta oo cusboonaysiinta ay timaaddo hawlgalinta wejiga ah ee Google badanaa sameeyo, waad rakibi kartaa APK hoosta si aad u hesho taxanahan wararka yaryar oo si wada jir ah u hagaajinaya waayo -aragnimada adeegsiga Khariidadaha, gaar ahaan marka qofku helo wicitaan cod.
Soo Degso APK-ka Khariidadaha Google
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » APK » [APK] Khariidadaha Google nooca 9.20 wuxuu helayaa awood uu ku daro meelo taariikhda iyo inbadan
Samsung Galaxy S7 Edge oo midabkeedu yahay qalin ayaa runtii u muuqda mid fiican